लभ गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ ? -
भाद्र ४ गते २०७६
सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गरौं : बाबुराम भट्टराई
बामदेवलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने नेकपाको निर्णय
खरेलको नेतृत्वमा ‘हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली’ अभियान
राष्ट्रपतिको स्वागतमा सार्वजनिक बिदा
राष्ट्रपतिलाई थप शक्तिशाली बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना
लभ गर्ने तरिका जान्न चाहनुहुन्छ ?
हाम्रो जीवनमा कुनैपनि सम्बन्ध अति महत्वपूर्ण हुन्छ । यीनै सम्बन्धहरुमा श्रीमान्-श्रीमतीको सम्बन्ध सबैभन्दा विशेष र नजिक हुन्छ ।
भनिन्छ, श्रीमान्-श्रीमती शरीर दुई तर आत्मा एक हुन् । जीवनरुपी गाडी यीनै दुई पाङ्ग्राको सहायतामा चल्ने गर्छ । त्यसैले दम्पत्तिले एक-अर्काको सम्बन्धमा प्रेम, साथ र सहयोग दिनु अति आवश्यक हुन्छ ।
पुरुषको तुलनामा महिलाहरु धेरै भावुक हुन्छन् । उनीहरुमा साना-ठूला तथा राम्रा-नराम्रा कुराको छिट्टै प्रभाव पर्छ । तर तीनै महिलाको भित्री मन पुरुषको तुलनामा अति नै बलियो हुन्छ ।
त्यसैले उनीहरु ठूलाभन्दा ठूला पीडा पनि सहन सक्छन् र कसैलाई यसको बारेमा थाहासमेत हुन दिँदैनन् । आफ्नो श्रीमानलाई समेत कतिपय कुराहरु बताउँदैनन् । तर दाम्पत्य जीवनमा माया-प्रेम यथावत राख्नका लागि एक-अर्कालाई हरेक कुरा बताउनु आवश्यक छ ।
श्रीमान्-श्रीमतीको सम्बन्ध एउटा राम्रा साथीको जस्तो हुनु पर्छ । केवल श्रीमतीमात्र होइन श्रीमानले पनि हरेक कुरा श्रीमतीलाई बताउनु आवश्यक हुन्छ । यदि तपाईं संयुक्त परिवारमा रहनु हुन्छ भने आफ्नो परिवारका सदस्य र आफ्ना श्रीमतीलाई गर्नुपर्ने व्यवहार राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ ।
जसरी तपाईं आफ्ना आमा-बुबा र भाइ-बहिनीसहित अन्य सदस्यलाई मान-सम्मान र माया गर्नु हुन्छ, त्यस्तै माया-प्रेम र सम्मान श्रीमतीलाई पनि दिनु पर्छ । त्यस्तै श्रीमतीले पनि श्रीमानको भावना बुझ्नु पर्छ, उनले श्रीमानलाई परिवारको कर्तव्य पूरा गर्न सहयोग गर्नु पर्छ । आफ्नो बारेमा मात्र सोच्ने जस्ता कार्य गर्नु हुँदैन ।
अधिकांश प्रेम विवाहमा श्रीमान्-श्रीमतीबीचमा साथीको जस्तो व्यवहार हुन्छ, तर त्यही व्यवहार परम्परागत अर्थात मागी विवाहमा हुँदैन भन्ने सोचाइ अधिकांश दम्पत्तिहरुको हुन्छ । यद्यपि, विवाह जस्तो भएतापनि श्रीमान्-श्रीमतीबीच सामञ्जस्य भैरहनु नै सफल वैवाहिक जीवनको मूल मन्त्र हो । यदि दम्पत्तिबीच एक-अर्काप्रतिको हरेचाह र माया बराबर हुने हो भने श्रीमान्-श्रीमतीलाई राम्रो साथी बन्न प्रेम अथवा मागी, जस्तो प्रकारको विवाहमा पनि कुनै फरक पर्दैन ।
सरस्वतीका कप्तान दीपेश श्रेष्ठमाथि २ वर्ष प्रतिबन्ध
बलात्कार अभियोगमा राज्यमन्त्रीका सल्लाहकार पक्राउ
नेपाली सेनालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्दै मेगा बैंक
महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ढकालको उम्मेदवारी
कोशी अस्पताल शिक्षण अस्पतालमा रुपान्तरण गरिने
रामकृष्णटोल नेवा मिसा पुचःको रक्तदान
अखिल नेपाल फुटबल ९एन्फा० ले सरस्वती क्लबका कप्तान दिपेश श्रेष्ठलाई दुई वर्षको…
बलात्कार आरोपमा शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरका आर्थिक सल्लाहकार अमृतकुमार घले पक्राउ…
मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले कञ्चनपुरमा नेपाली सेनालाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने उद्देश्यले…
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि चन्द्र ढकालले उम्मेद्वारी घोषणा…
नेपालदुत पाठकसम्म समाचार, सूचना, विचार र मनोरञ्जन पुर्याउने डिजिटल दुत हो । संसारमा आविष्कार भएका नयाँ प्रविधि, विश्वका घटना क्रमदेखि नेपाली पुगेका ठाउँका गतिविधि पनि हाम्रा सरोकारका विषय हुन् । नेपालदुत मिडिया प्रालि पोखराबाट सञ्चालित यो समाचार पोर्टलले विचार, विश्लेषणमा सिमित नरही खोजी पत्रकारितालाई पनि बढाबा दिने लक्ष्य…